အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် - ဘာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်သင်၏ content စျေးကွက်မဟာဗျူဟာကမရှိရင်ပျက်ကွက် | Martech Zone
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသူတို့ site ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးပေါင်းများစွာထုတ်ဝေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ပြproblemနာမှာဆောင်းပါးအနည်းငယ်သာဖတ်ရှုခြင်း၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်းနှင့်၎င်းတို့အနက် ၁ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ၀ င်ငွေရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်သင့်အားစိန်ခေါ်လိမ့်မည်။ မင်းရဲ့စာမျက်နှာဘယ်ဟာရာခိုင်နှုန်းဟာတကယ်ကိုရေပန်းစားပြီးပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့နေတယ်ဆိုတာကိုသင်အံ့သြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ ဘယ်စာမျက်နှာတွေဟာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထဲမှာအဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြမထားဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအသစ်များသည်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်သာအဆင့်သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီးမည်သူမျှမဖတ်သောအကြောင်းအရာများအတွက်နာရီထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတွင်အယ်ဒီတာများနှင့်စာရေးသူများအပြည့်ပါ ၀ င်သော ၀ န်ထမ်းများရှိသော်လည်း၎င်းတို့တွင်ဗဟိုဗျူဟာမရှိခဲ့ပါ ဘာ ရေးသားဖို့။ သူတို့ဟာသူတို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတွေအကြောင်းရေးတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုသုတေသနပြုပြီးပြtroublနာအချို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုတည်းမှအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းနှင့်ဆောင်းပါးများစွာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်မှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မထား၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိတဲ့၊ ညံ့ဖျင်းတဲ့ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးများစွာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့၌ပင်ရှုပ်ထွေးမှုအနည်းငယ်ရှိသည် ဘယ္လို ဓာတ်ပုံတွေတောင်မပါတဲ့ဆောင်းပါးတွေ။
ကျနော်တို့ချက်ချင်းအဖြေတစ်ခုအကြံပြုခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာစမ်းသပ်အစီအစဉ်ကိုလုပ်လို့ရမလားလို့မေးခဲ့တယ်၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့သတင်းခန်းမရဲ့အရင်းအမြစ်တွေထဲက ၂၀% ကိုအကြောင်းအရာအသစ်တွေရေးတာထက်ပိုကောင်းအောင်ပေါင်းစပ်တယ်။
အဆိုပါရည်မှန်းချက်တစ် ဦး သတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တယ် အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် - ထို့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ပရိသတ်၊ သူတို့၏ရှာဖွေမှုအဆင့်များ၊ ရာသီအလိုက်၊ တည်နေရာနှင့်သူတို့၏ပြိုင်ဘက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခေါင်းစဉ်ကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနတွင် ဦး စားပေးသည့်သတ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုလစဉ်စီစဉ်ထားသည်။
ဒါဟာကျက်သရေနဲ့တူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည့်စုံသောအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်ထားသောအရင်းအမြစ်များ၏ ၂၀% သည်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားသောအခြားအကြောင်းအရာများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်သာလွန်သည်။
အကြောင်းအရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်တိုးမြှင့်စေရန်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ ပေါင်းစပ်ပြီးနောက်ထပ်ပေါင်းစပ်သင့်သနည်း။
မလွယ်ဘူး ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံး ROI ရအောင်သေချာစေရန်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု၏ ဦး စားပေးအစီအစဉ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြီးမားသောအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအင်ဂျင်ကိုပင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ စာမျက်နှာတိုင်းကိုသော့ချက်စာလုံး၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ပထဝီဝင် (ပစ်မှတ်ထားလျှင်)၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကစာရေးဆရာများနှင့်အယ်ဒီတာများကလည်း၎င်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းတို့အားခေါင်းစဉ်တစ်ခု၊ ပြည့်စုံသည့်ဆောင်းပါးအသစ်သို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်သင့်သည့်ရှိပြီးသားအကြောင်းအရာနှင့်ဝဘ်ဝန်းကျင်မှယှဉ်ပြိုင်နေသောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့အားပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန်လိုအပ်သည့်သုတေသနအားလုံးကိုသူတို့အားပေးခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအတော်များများသည်အချိန်နှင့်အမျှတူညီသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးများကိုစုဆောင်းကြသည်၊ သို့သော်သင်၏ site သို့လာရောက်လည်ပတ်သူသည်သူတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန် နှိပ်၍ သွားလာရန်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်ဤအကြောင်းအရာများကိုတစ်ခုတည်း၊ ပြည့်စုံပြီးကောင်းမွန်စွာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းရန်အရေးကြီးသည် မာစတာ ဗဟိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအပေါ်ဆောင်းပါး။
သင်၏ထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သင်၏အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာသည်အဆင့်တစ်ခုစီတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံသင့်သည် ဝယ်သူခရီး:
ပြနာဖော်ထုတ်ခြင်း - စားသုံးသူများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ၄ င်းတို့၏ပြproblemနာကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်ရန်နှင့်သင်၊ သင်၏အိမ်သူအိမ်သား (သို့) သင့်လုပ်ငန်း၏နာကျင်မှုများကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ကူညီခြင်း။
ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေရေး - စားသုံးသူ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြproblemနာဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကူညီပေးခြင်း။ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့် 'How-to' ဗီဒီယိုမှ။
လိုအပ်ချက်များတည်ဆောက်ခြင်း - စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားအဖြေတစ်ခုချင်းစီကိုအပြည့်အဝအကဲဖြတ်ရန်၎င်းတို့အားအကောင်းဆုံးသောအရာများကိုနားလည်ရန်ကူညီခြင်း။ ဤသည်ကသင်၏ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြရမယ့်ကြီးစွာသောအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပေးသွင်းရွေးချယ်ရေး - စားသုံးသူများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားသင်၊ သင်၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်သင်၏ထုတ်ကုန်ကိုသူတို့အဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သင့်သည်ကိုနားလည်စေရန်ကူညီခြင်း။ သင်၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ တတိယပါတီအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များစသည်တို့ကိုမျှဝေချင်သောနေရာဖြစ်သည်။
ကဏ္ဍများ ကြောင်းကောင်းစွာဒီဇိုင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်ငယ်ကနေ subheading မှတဆင့် skim ရန်လွယ်ကူသောခဲ့ကြသည်။
bullet lists ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆောင်းပါး၏အဓိကအချက်များနှင့်အတူ။
ပုံရိပ်။ ဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးဖြစ်နိုင်သမျှမျှဝေခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရှင်းပြခြင်းနှင့်နားလည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကိုယ်စားပြုသောပုံသမ်းခြင်း။ Micrographics နှင့် infographics သည် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရာတွင် စကားလုံးရေတွက် အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်မဟုတ်ခဲ့ပါ၊ ဤဆောင်းပါးများသည်ရာဂဏန်းအနည်းငယ်မှစကားလုံးထောင်ပေါင်းများစွာသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ပိုမိုတိုတောင်းသော၊ မဖတ်ရသေးသောဆောင်းပါးများကိုဖယ်ရှားပြီးပိုကြွယ်ဝသည့်ဆောင်းပါးများသို့ပြန်ပို့သည်။
Backlinko သည်ရလဒ် ၁ သန်းကျော်ကိုဆန်းစစ်လေ့လာပြီးပျမ်းမျှနံပါတ် ၁ အဆင့်တွင်စာလုံးရေ ၁,၈၉၀ ရှိသည်
ဒီအချက်အလက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဝုဏ်နဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုထောက်ခံထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများမည်သို့တည်ဆောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်။ နောက်တဖန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုတေသနနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုဆောင်းပါးများ, infographics နှင့် whitepapers ၏တစည်းကိုမလုပ်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တမင်တကာဒီဇိုင်းဆွဲသည် စာကြည့်တိုက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ၄ င်းတို့၏လက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်ကွာဟချက်များကို ဦး စားပေးပါ။
တောင်မှအပေါ် Martech Zoneငါတို့လုပ်နေတယ် ငါရေးသားချက်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကိုဝါကြွားခဲ့သည်။ ဘာလဲသိလား? ကျနော်တို့ဘလော့ဂ်ကိုတင်ပို့ချက် ၄၀၀၀ လောက်ကိုချုံ့ပြီးအပတ်တိုင်းပြန်ပြီးအဟောင်းတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားလို့ပါ အသစ်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်မကြာခဏအဆင့်အတန်းရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့နှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုများရှိသောကြောင့်သူတို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသည်။
အလားအလာများနှင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှာဖွေနေသည့်ဖောက်သည်များသည်ဘာတွေလဲ ဝယ်သူခရီးအတွက်အဆင့်တစ်ခုစီ သူတို့ကိုသင်သို့မဟုတ်သင်၏ပြိုင်ဘက်များဆီသို့ ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်နည်း
ဘာ နတ်ကတော် သင်ထည့်သွင်းရမလား။ ဆောင်းပါးများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သင်ထောက်ကူစာရွက်များ၊ အဖြူရောင်စာရွက်များ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ၊ ထောက်ခံစာများ၊ ဗီဒီယိုများ၊
ဘာ ယခု သင့်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများရှိပါသလား။
ဘာ သုတေသနလုပ်ငန်း ဒီဆောင်းပါးမှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအားဖြည့်ပြီးကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်မလား။
အဆင့်တိုင်းနှင့်ဆောင်းပါးတိုင်းတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ဘာလုပ်သနည်း ပြိုင်ဖက်ဆောင်းပါးတွေက သင်ဘယ်လိုပိုကောင်းဒီဇိုင်းနိုင်သလဲ
အကြောင်းရေးသားခြင်း သငျသညျကုမ္ပဏီအပတ်တိုင်းအလုပ်မလုပ်တော့ပါ သင်၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအကြောင်းရေးသားရမည်။ ည့်သည်တွေမဖြစ်ချင်ကြဘူး ရောင်းချခဲ့; သူတို့ကသုတေသနလုပ်ပြီးအကူအညီလိုချင်တယ်။ ငါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းကိုရောင်းနေရင်၊ ငါတို့လုပ်နိုင်တာတွေရော software ဖောက်သည်တွေဖောက်သည်တွေပြီးအောင်လုပ်တာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်ဖောက်သည်များ၏အလုပ်အကိုင်နှင့်သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာများကိုကူညီပေးခြင်းသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းရှိကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်ဖောက်သည်များအားမည်သို့ကူညီသည်ကိုပါအကြောင်းအရာသည်ကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အလုပ်တွင်သင်၏အလားအလာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောအခြားအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးများပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ထံမှအော်ဂဲနစ်သုတေသန Semrush ငါဆွဲဆောင်လိုသောအလားအလာနှင့်ဆက်စပ်သောအမြင့်ဆုံးရှာဖွေထားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်။ အဖြစ်အပျက်ဆောင်းပါးများ၏စာရင်းကိုလည်းအသုံးဝင်ပါစေ။ ခင်ဗျားဆောင်းပါးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ချင်ရင်မင်းတို့ဟာသူတို့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
BuzzSumo မှလူမှုရေးအရမျှဝေထားသောသုတေသန။ BuzzSumo သည်ဆောင်းပါးများကိုမည်မျှမကြာခဏမျှဝေသည်ကိုခြေရာခံသည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူကြိုက်များမှု၊ ဝေမျှနိုင်မှုကိုဖြတ်ကူး။ အကောင်းဆုံးဆောင်းပါးကိုရေးသားနိုင်လျှင်၎င်းသည်သင်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ၀ င်ငွေများရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ BuzzSumo သည်မကြာသေးမီကအလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါးတစ်ခုကို၎င်းအတွက်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုရေးသားခဲ့သည် အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း.
အများပါဝင်သော taxonomy ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သင်၏ဆောင်းပါးသည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောခေါင်းစဉ်ငယ်များအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ရန်သေချာစေရန်။ ထွက်ခွာသည် ပြည်သူ့အဖြေ ခေါင်းစဉ်များ၏ taxonomy အပေါ်အချို့သောအံ့သြဖွယ်သုတေသနအဘို့။
ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးများစာရင်းကိုတည်ဆောက်ပါ၊ အရေးကြီးပုံကို ဦး စားပေးပြီးသင့်ဆိုဒ်ကိုစတင်ရှာဖွေပါ။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများရှိပါသလား။ ဆက်နွယ်သောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသောအကြောင်းအရာများရှိပါသလား။ အကယ်၍ ၎င်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လျှင်ပိုကြွယ်ဝသော၊ ပိုမိုပြည့်စုံသောဆောင်းပါးများကိုရေးပါ။ ထို့နောက်သင်၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအားနောက်ထပ်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အကြောင်းအရာများကိုကိုင်တွယ်ပါ။
သင်၏အကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်ကို ဦး စားပေးများနှင့်တည်ဆောက်ပါ။ သင်၏စာကြည့်တိုက်မပြီးမချင်းအဟောင်းကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အသစ်ရေးသားခြင်းများအကြားအချိန်ပိုင်းခြားရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ ပြောင်းလဲနေတဲ့စီးပွားရေးဝန်းကျင်၊ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုတို့ကြောင့်သင့်စာကြည့်တိုက်ထဲသို့ထပ်ထည့်ရန်အကြောင်းအရာအသစ်များအမြဲရှိနေသည်။
ဆောင်းပါးအဟောင်းတွေကိုပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ဆောင်းပါးတွေအဖြစ်ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ၊ ဆောင်းပါးဟောင်းတွေကို redirects နဲ့အစားထိုးပါ။ ငါဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ချင်းစီဘယ်လိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသလဲဆိုတာကိုမကြာခဏသုတေသနလုပ်ပြီးဆောင်းပါးအသစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ချိတ်ဆက်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်ဤသို့ပြုလုပ်သောအခါ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်မကြာခဏပြန်လာပြီးပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ကြသည်။ ထို့နောက်လူကြိုက်များလာသောအခါအဆင့်တွင်မြင့်တက်လာသည်။
သင်၏ဆောင်းပါးကိုရှေ့ပြေးလေယာဉ်ဆင်းသက်စဉ်လေယာဉ်မှူးအဖြစ်စဉ်းစားပါ။ လေယာဉ်မှူးသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမရှိပါ။ သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်တိုင်များကိုရှာဖွေသည်၊ ဆင်းလာသည်၊ ထို့နောက်လေယာဉ်မထိမှီတိုင်အောင် ပို၍ အာရုံစူးစိုက်သည်။
လူတို့သည်ကန ဦး စကားလုံးအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုစာမဖတ်ကြပါ စကင် က။ သငျသညျထိထိရောက်ရောက်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်, ရဲရင့်, အလေးပေး, ကိုးကားပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ပုံရိပ်နှင့်ကျည်ဆံအချက်များထိထိရောက်ရောက်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်စာဖတ်သူများအားမျက်စိကိုစူးစိုက်။ အာရုံစိုက်စေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တကယ်ရှည်လျားသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါက၎င်းသည်အသုံးပြုသူကို နှိပ်၍ ၎င်းတို့စိတ်ဝင်စားသောအပိုင်းသို့သွားနိုင်သည့်ကျောက်ဆူးစာလုံးများပါ ၀ င်သည့်ဇယားဖြင့်ပင်သင်စတင်ချင်ပေမည်။
သင်အကောင်းဆုံးစာကြည့်တိုက်ရှိလိုလျှင်သင်၏စာမျက်နှာများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုစီသည် the ည့်သည်ကိုအပြည့်အ ၀ သက်ရောက်မှုရှိစေရန်နှင့်၎င်းတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်သည့်နည်းလမ်းများအားလုံးရှိသင့်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်၊ သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထူးကဲသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိရမည်
သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအရေးမယူပါကအကြောင်းအရာသည်အသုံးမဝင်ပါ။ သင်၏စာဖတ်သူများအားနောက်လာမည့်အရာ၊ သင်လာမည့်အဖြစ်အပျက်များ၊ ရက်ချိန်းယူရန်စီစဉ်ပုံစသည်တို့ကိုသိစေရန်သေချာစေပါ။
Tags: backlinkoအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်နည်းဗျူဟာအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုgoogle အဆင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုဘယ်လောက်ရှိသင့်သလဲစာကြည့်တိုက်သုတေသနလုပ်ငန်းsemrushနှုတ်ကပတ်တရားတော်အရေအတွက်